Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn | Avy amin'ny Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Fitsinjarana
Ity lahatsoratra ity dia fanavaozana ny anay Ubuntu 14.04 torolàlana fametrahana aorian'ny fametrahana.
Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn nahita ny hazavana andro vitsivitsy lasa izay. Tahaka ny ataontsika isaky ny mamoaka an'ity distro malaza ity dia misy ireto zavatra tokony hataonao aorian'ny fanaovana a fametrahana hatrany am-piandohana.
Azo inoana fa taorian'ny fanombohana ny Utopic Unicorn dia nisy fanavaozana vaovao niseho ho an'ireo fonosana samihafa izay nateraky ny sary ISO nozarain'i Canonical.
Raha te-hijery horonan-tsary vitsivitsy ianao ary hijery atiny anaty tranonkala fitetezana Internet dia mila apetrakao ny flash plugin. Azo atao ny mametraka azy io mivantana avy amin'ny Center Software ary mampiditra ny teny hoe "flash" na avy amin'ny terminal misy ity baiko manaraka ity:
sudo apt-mahazo mametraka flashplugin-installer
Hanampiana fanohanana DVD hafanana ("originals" rehetra), nanokatra terminal aho ary nitendry ireto manaraka ireto:
Tamin'ny fotoana nanoratana, ny fonosana Getdeb sy Playdeb ho an'ny Ubuntu 14.10 dia mbola tsy nisy.
GetDeb dia tranokala iray izay misy fonosana Deb izay tsy tonga ao amin'ny tahirin'ny Ubuntu na ny kinova ankehitriny izay hita ao dia novolavolaina sy natao ho an'ny mpampiasa farany.
Tsy ilaina izany, satria ny fametrahana ny .deb miaraka amin'ny tsindry roa sosona dia manokatra ny Ivotoerana Rindrambaiko fa mety hahaliana ny olona tsy mifidy.
sudo apt-mahazo mametraka gnome-shell ubuntu-gnome-desktop
Mitandrema: ny fametrahana GNOME Shell amin'ity fomba ity dia mety hametraka fonosana GNOME hafa navelan'ny bandy Ubuntu. Ohatra, Nautilus. Azo antoka fa mety izany no tadiavinao, ka raha izany dia tsy hisy ny olana fa tokony ho fantatrao fa mety hitondra aretin'andoha mihoatra ny iray ianao. Raha te hampiasa GNOME Shell ianao, nefa tsy miala amin'i Ubuntu, ny tolo-kevitro dia ny manandrana ny fizarana azo Ubuntu GNOME.
Raha tianao ny kanelina sy Ubuntu dia mety tsara raha manandrana ny fizarana azo Linux Mint.
sudo apt-mahazo hametraka tontonana matevina-desktop-environment
Ny fomba tsara kokoa hitsapana ny MATE dia amin'ny alàlan'ny fampidinana ny fizarana azo Ubuntu MATE. Amin'izany fomba izany dia sorohinao ny karazana olana rehetra rehefa mametraka ny tontolon'ny birao tianao.
Mandehana any amin'ny làlan'ny birao Ubuntu 14.10
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn
Tiako izany satria azo fintinina amin'ny hoe "Apetraho izao ny Linux Mint." Izy io dia miaraka amin'ny zavatra rehetra tokony hatao amin'ny Ubuntu vao napetraka.
Firaisankina kely… 🙂 Haha…
"Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn"
- Esory ny Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn… 😛
Che, feno troll ity ... haha!
Na izany aza, manokana ity troll ity, tiako io iray io ary izany no antony namelako azy hiteny izay rehetra lazainy .. ary Apple Fanboy izy, ka… 😛
Apple fanboy ary mampiasa win 8.1: /
raulvl dia hoy izy:
JAJAJAJAJJAJAJA TSY MISY
Mamaly an'i raulvl
zazalahy mahantra dia hoy izy:
worale izay feno rindrambaiko manana kokoa noho ny milina cyber izay ampifandraisako!
Mamaly an'i poorboy
Walder dia hoy izy:
Valiny tamin'i Walder
Iguanaicke dia hoy izy:
Fafao tanteraka izany ary apetaho ny Mageia oo
Mamaly an'i Iguanaicke
Bla6 dia hoy izy:
Efa ela aho no nanaraka ny tranonkalanao ary tiako be ny zavatra alefanao, fa raha hanao tutorial amin'ny famoahana ny rafitra tsirairay ianao dia tokony hataonao amin'ny olon-kafa izany fa tsy ho very ny amponao isaky ny kinova Ubuntu izay manala azy ireo isaky ny 6 volana. tafahoatra araky ny hevitro (hazavaiko, manana ElementaryOS Freya sy OpenSUSE 13.1) aho.
(OFF ny tsikera manorina)
Araka ny nolazain'i @ 3ndriago:
Dingana 1: - Esory ny Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn… 😛
Dingana 2: apetraho ny 14.04 izay miaraka amin'ny 12.04 dia iray amin'ireo toerana marin-toerana efa tratrany ary ny firaisankina dia tsy mavesatra loatra: S
Valiny tamin'i Bla6
Azoko tsara ary zarao amin'ny lafiny sasany ny hevitrao. Na izany aza, azoko atao ny manome toky anao fa maro ny olona liana amin'ity karazana torolàlana ho an'ny kinova Ubuntu ity. Na dia misy fahasamihafana madinidinika eo amin'ny dikanteny tsirairay aza, indraindray ny fiovana dia tsy madinidinika toy ny eritreretin'ny olona iray.
Na izany na tsy izany ... tsy ny olona rehetra no mieritreritra toy ny iray ary mila manaja ireo olona ireo ianao ... ary ampio izy ireo. Ary koa, eritrereto fa maro ny olona vao manomboka amin'ity kinova Ubuntu ity (ho tsara na ho ratsy kokoa).
Na izany na tsy izany, misaotra tamin'ny fitsikerana nataonao.
DrakeX dia hoy izy:
Eny, amin'ny ahy manokana dia mampiasa win 8.1 aho, na izany aza tiako ny mandany fotoana amin'ny fametrahana sy amin'ny fampiasana Linux, amin'ity tranga ity dia mivoaka avy amin'ny Ubuntu ny dikanteny tsirairay avy, fantatro fa maro no tsy tia azy, fa farafaharatsiny dia tsara kokoa izy io rehefa mametraka , Manana OpenSUSE napetraka ihany koa aho ary hita fa tsy mampihetsika ny adapter tsy misy tariby usb ahy, izay tsy manjo ahy amin'ny ubuntu, tsy tiako ny mandany ny fotoako manandrana mampifandray amin'ny Internet raha toa ity kinova Linux ity (ary fantatro fa hisy hafa koa ) avelao aho hampiasa azy.
Misaotra anao tamin'ilay boky torolàlana aho, nanampy betsaka ahy io, nametraka zavatra ho ampiasaiko sy ny hafa izay mety ho hitanao fotsiny sy tsy ampiasainao intsony, fa ny tranga dia FANAMPIANA ary heveriko fa nahavita ilay asa ianao.
Valiny amin'i DrakeX
miguelibamar dia hoy izy:
Azoko ny valintenin'i Bla6. Fa raha tsy misy boky torolàlana ho an'ny fanavaozana rehetra dia ho sahirana ireo mpampiasa vaovao. Niditra an-tsokosoko tamin'ny Linux aho tamin'ny Ubuntu 10.xx (tsy tadidiko akory aza). Raha tsy nisy boky torolalana angamba dia miankina amin'ny Windows ihany io; Androany aho dia miasa miaraka amin'ny roa ary isaky ny afaka misafidy amin'ny Ubuntu aho.
Mamaly an'i miguelibamar
Tadidio @ Bla6 fa bilaogin'ny vondrom-piarahamonina ity ka raha tianao hiresaka momba ny fizarana hafa ity bilaogy ity dia afaka mamorona kaonty ianao ary mamoaka ny lahatsoratra.
mikasika ilay lahatsoratra; izay nanaraka ny pejy taloha usemoslinux.blogspot.com dia hahafantatra fa isaky ny kinova vaovao an'ny Ubuntu, i @usemoslinux (Pablo) dia mamoaka kinova vaovao amin'ity lahatsoratra ity izay kopia tsotra & apetaka amin'ilay lahatsoratra teo aloha ary misy fanovana kely hanamboarana azy ilay famerenanana dia marina tokoa fa tsy hiantso ilay fahaverezan'ny borikinao aho.
Mikasika ny maha-zava-dehibe ny lahatsoratra dia milaza aminao fotsiny aho fa tamin'izany fotoana izany, taona vitsivitsy lasa izay, ity lahatsoratra ity dia tena zava-dehibe tamiko ary fantatro fa efa natao ho an'ny maro izany ary hitohy ho an'ireo vao tonga ao amin'ny Ubuntu.
Miresaka momba ireo tondro ianao, tsy tadidiko akory izy ireo. Fantatrao ve ny fomba ahafahanao manamboatra ireo tondro izay anananao ao anaty bara? Midika izany, esory ny iray ary ampodio indray izy, zavatra toy izany.
Tena tsara 😉
Tamin'ny fanapahan-kevitro manokana, farafaharatsiny mba nanapa-kevitra tsy hijanona amin'ny 14.04 aho ary tsy hametraka 14.10 satria araka ny angon-drakitra rehetra dia kely dia kely ny fahasamihafana. Izaho dia iray amin'ireo izay amin'ny farany tsy afaka mitazona fa tsara amin'ity indray mitoraka ity no eritreretiko. Raha fintinina, ity preliminary ity dia ny milaza aminao fa na eo aza ny zava-drehetra heveriko fa izany dia ny lahatsoratra feno sy mahasoa indrindra ao amin'ny: inona no hatao aorian'ny fametrahana ubuntu ... .. Miarahaba anao ary indrindra indrindra misaotra betsaka.
Toa ahy io sa tsy nisy ilay -get ????
Misaotra ny mpitari-dalana, marina fa tamin'ny fotoana voalohany nandehanako tany amin'ny tontolon'ny linux ireto mpitari-dalana ireto dia nanampy ahy tokoa, lojika niaraka tamin'ny fandehan'ny fotoana izay tsy ahitan'ny olona saina, fa azo antoka ho an'ny maro hafa.
Manomboka amin'ny Ubuntu 14.04, ny manager manager apt ("Advanced Package Tool") dia manana safidy vaovao. Tsy mila manoratra "apt-get" intsony ianao ary afaka mampiasa "apt" fotsiny, (mbola hiasa ny apt).
Hahaha, mianatra zava-baovao foana ianao! Miarahaba sy misaotra
tsara ho fantatra. Ataoko angamba fa nanisy solonanarana ao amin'ny .bashrc izy ireo
Tsy heveriko fa ubuntu a gnu / linux distro, toa windows izy io fa tsy hoe rehefa manavao kinova ambonimbony kokoa dia mandeha daholo ny zavatra.
lehilahy mora amboarina, havaozina isaky ny 2 taona ary dia izay. mijanona amin'ny 14.04 izay fanohanana maharitra sy fanavaozana amin'ny aprily 2016 ka hatramin'ny 16.04. Tsy midika izany hoe ho lany fanavaozam-baovao ianao mandritra ny 2 taona satria hisy hatrany ny fanavaozana ny fiarovana, ny kernel ary ny rindrambaiko sasany toy ny firefox izay tadiavin'ny mpampiasa manavao hatrany
Tsy misy na inona na inona amin'izay, tsy maintsy mijery amin'ny virtualbox isika raha hijery ny zava-mitranga
Ricardo Montalbo dia hoy izy:
Te hametraka azy amin'ny mac-ko aho: D, misy lesona ve?
Valiny tamin'i Ricardo Montalbo
Andriamatoa N dia hoy izy:
Misy protokolon'ny hetsika malaza be tato ho ato.
1. Jereo hoe avy aiza ny Ubuntu
2. Esory / avereno ny DVD boot
3. Mametraka Linux Mint.
Valiny tamin'i Andriamatoa N
jehu88 dia hoy izy:
asa tena tsara.
Valio ny jehu88
Brian dia hoy izy:
Salama, apetrakao ity kinova ity amin'ny alàlan'ny boot amin'ny USB, misy fotoana sarotra itombohana, saingy farany afaka nanao fametrahana tanteraka aho, tamin'ny fotoana nanombohana indray ny grub dia misafidy Ubuntu aho ary mijanona tsy mandeha ilay efijery mainty. na inona na inona. Inona no mety ho? Andro iray aho no toy izao.
Miaraka amin'ny distro hafa dia mahazo lesoka ACPI aho na zavatra toy izany.
Valiny tamin'i Brian
Nandritra ny andro vitsivitsy dia nanolotra serivisy famaliana fanontaniana vaovao izahay Anontanio FromLinux. Manoro hevitra anao izahay hamindra io karazana consultation io any mba hahafahan'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo manampy anao amin'ny olanao.
Andramo apetraka ny teny hoe "fivoahana" ho ahy, aorian'izay dia manomboka tsy misy olana ny Ubuntu.
Na dia mety hadisoana hafa aza izany.
Ary nivoaka i Trisquel 7! veloma Ubuntu!
Esteban Gimenez dia hoy izy:
Nampiasa Ubuntu 14.04 aho nandritra ny herintaona ary tsy mila mamolavola PC amin'ny fotoana rehetra aho, tsy nisy ny lesoka tamin'ny rafitra na nihena ny PC toa ny nampiasako ny Windows 8, Mba hanavaozana ny Ubuntu 14.10 dia io no voalohany fotoana nanaovako endrika ny PC tamin'ity taona ity, sa azo havaozina avy ao amin'ny manager Update?
Valiny tamin'i Esteban Gimenez
Eto ny valin'ny fanontanianao: http://ask.desdelinux.net/603/como-actualizar-ubuntu-14-04-a-ubuntu-14-10
Manoro hevitra izahay hampiasa an'ity serivisy ity (Ask From Linux) mba hanatanterahana an'io karazana fangatahana io. 🙂
Manantena aho fa ilaina ity fampahalalana ity.
Raha ny tena izy ve dia kely dia kely ny fahasamihafana raha tsy aotra. Izaho, izay "lozabe" fanavaozana ny ubuntu, tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy vitako izany ary tamin'ny solosaina finday hafa dia nametraka 14.10 mivantana aho ary toa tsy nametraka zava-baovao. Heveriko fa hiditra ao anatiny ny fanavaozana nefa tsy hitako mihitsy na kely aza. Na izany na tsy izany, hifikitra amin'ny 14.04 aho. Fiarahabana.
Hitako fa ny fizarana sary dia tsy novolavolaina tanteraka (amin'ny resaka mpamily), ka ity misy ny anjara birikiko kely ho an'ireo izay manana karatra nVidia / Intel hybrid.
Ahem… Misy fampiharana nVidia antsoina hoe Optimus ho an'ny varavarankely izay ny asany dia ny mifamadika eo anelanelan'ny nVidia sy ny sary intel amin'ny tanana sy / na mandeha ho azy arakaraka ny fangatahan'ny asa. Inona no ahafahan'ny solosaina finday miasa saika avo roa heny, raha tsy takiana amin'ny loharano izany.
Ao amin'ny Linux dia misy fampiharana roa an'ity haitao ity. Ny iray dia antsoina hoe bumblebee, izay amin'ny alàlan'ny antso amin'ny baiko optirun, dia mamela anao hampitaovana rindrambaiko iray amin'ny herin'ny sary nVidia, raha mbola any aoriana kosa dia mbola mampiasa sary intel ihany izy. Ny iray kosa dia antsoina hoe prime, izay ahafahanao misafidy amin'ny alàlan'ny nvidia-setting eo anelanelan'ny profil 2 ahafahanao mihazakazaka mandritra ny session X server, ny profil iray dia nVidia ihany, ny Intel hafa ihany. Ity fomba farany antsoina hoe prime ity (* manantena fiantsoana megatron fahatelo *) dia tokony homarihina fa natokana ho an'ny Ubuntu izy io ary tena ilaina ho antsika izay manao karazana tetika rehetra haharitra kokoa ny bateria, na dia hahomby aza ny fahombiazany tsy ho tsara toy ny amin'ny windows.
Raha toa ka manintona ny sain'ny antoko liana maniry ny hametraka "prime" ity dia ny dingana manaraka (Ubuntu 14.04 sy 14.10).
2) Atombohy indray
3) lspci -vnn | grep -i VGA -A 12 // alaivo ny maodelin'ny grafo ary tadiavo ny mpamilinao ao> http://www.nvidia.com/Download/index.aspx
4) sudo add-apt-repository ppa: xorg-edgers / ppa -y && sudo apt-get update // ampio ireo repositories
5) Apetraho ny mpamily avy amin'ny "Driver voafetra" na "Mpamily fanampiny"
6) sudo apt-mahazo mametraka nvidia-prime
7) avereno indray
8) Sokafy ny fametrahana nvidia-setting, ao amin'ny fizarana profiles dia safidio ny kisary safidinao.
P.S. Raha te hampiasa Bumblebee ianao dia manoro hevitra anao aho manandrana ny manjaro distro, manana fitaovana iray izay ahalalanao fa mora ny mametraka mpamily tompony, afa-tsy ireo toa an'i Ubuntu irery ihany.
vola lany dia hoy izy:
misaotra betsaka tamin'ny fanampiana ho an'ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra amin'ny programa mora
Mamaly ny vidin'ny varotra
tepublico.es dia hoy izy:
vita ny dingana rehetra dia misaotra betsaka!
Valio ny tepublico.es
Nicolas Soto dia hoy izy:
Valiny tamin'i Nicolas Soto
Grooveshark dia hoy izy:
Tena tsara ubuntu
Mamaly an'i Groovehark
Linus11 dia hoy izy:
Misaotra ny tutorial rehefa nanao ny fanavaozana hitako io? FAMPITANDREMANA: Mandingana ny taratasy fanamarinana duplicate UbuntuOne-Go_Daddy_Class_2_CA.pem
mila matahotra ve aho?
Valiny amin'i Linus11
Tooooooodo tsy ilaina mihitsy io raha mametraka windows isika.
Ao amin'ny Ubuntu 14.10 aho izao manandrana mitady ny fomba hanovana ny Firefox ho amin'ny Espaniôla satria avy amin'ilay Firefox ihany ao amin'ny Preferences dia tsy mandray ahy izany. Ary avy eo dia tsy maintsy mitady ny fomba fanovana ny klavier amin'ny Espaniola latina aho. Ka tsy afaka manoratra ennes na accents aho ary Alt + 64 tsy miasa hametraka ilay eo amin'ny sonia.
Hanohy ny fanandramana aho ... fa ny tena izy dia ho sarotra be ny manapa-kevitra amin'ny Linux raha toa ka tsy miaraka amin'ny OS ireo zavatra fototra ireo ary mitaky fotoana be.
Tsy maintsy nanahiko ny amin'ny mailaka avy amin'ny pejin-tranonkala ... araka ny hevitrao?
Na izany na tsy izany, amin'ny maha-fanampiana ahy dia manoro hevitra anao aho hijery ireto rohy manaraka ireto:
Ahoana ny fanovana ny fitenin'ny Ubuntu (ao anatin'izany ny Firefox): https://www.youtube.com/watch?v=PJyB-oY3CqE
Ahoana ny fanovana ny mpanamarina ny tsipelina ao amin'ny Firefox: https://blog.desdelinux.net/firefoxchrome-como-habilitar-el-corrector-ortografico-en-espanol/
Ahoana ny fametrahana ny rakibolana espaniola amin'ny LibreOffice: https://blog.desdelinux.net/firefoxchrome-como-habilitar-el-corrector-ortografico-en-espanol/
Ahoana ny fanovana ny kitendry amin'ny Ubuntu: http://ask.desdelinux.net/1102/elegir-distribucion-teclado-espanol-latinoamericano-ubuntu?show=1102#q1102
Ahoana ny fomba hampidirana kaody ASCII ao Ubuntu: http://ask.desdelinux.net/1042/como-ingresar-codigo-ascii-en-ubuntu-otras-distribuciones?show=1042#q1042
Juanjoc_chan dia hoy izy:
Salama olona! Misy fomba iray hametrahana ilay mpandefa firaisan-kina eo amin'ny farany ambany amin'ny efijery ao amin'ny Ubuntu 14.10? Misaotra mialoha ary mamela ny tsy fahalalako.
Mamaly an'i Juanjoc_chan
oscar ascona dia hoy izy:
Tsy dia manam-pahalalana momba an'io raharaha io aho fa misaotra ny zavatra nataoko ary mangataka aminao fotsiny ny fampahalalana bebe kokoa momba ilay lohahevitra amin'ny fomba tsotra sy kendrena, arahabaona aho
Mamaly an'i oscar ascona
Vivaldi, ny mpizaha browser izay te-ho Opera miaraka amin'ny interface Metro